आजको राशिफल (२०७४ पौष ०३ गते/२०१७ डिसेम्बर १८)
December 18, 2017 राशिफल, वार्षिक राशिफल २०७४
वि.सं. २०७४ पौष ०३ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१७ डिसेम्बर १८ तारिख
पौष कृष्ण अमावस्या, ज्येष्ठा नक्षत्र, बृश्चिक राशिको चन्द्रमा, गण्ड योग, नाग र किंस्तुघ्न करण
आजको चाडपर्व र उत्सव : सोमवती अमावस्या (सोमबारे औंसी), स्नानदानादिका लागि अमावस्या, हलो बार्ने दिन, पौषे औंसी, बेत्रावती, विष्णुपादुका, बराहक्षेत्र, गया (विहार, भारत) आदि विभिन्न तीर्थस्थलमा श्राद्ध गर्ने दिन, तिथि थाहा नभएकाहरूको स्मृतिमा श्राद्ध गर्ने दिन
राहु काल : बिहान ०८:०७ देखि ०९:२५ सम्म
यमघण्ट : दिउँसो १०:४२ देखि १२:०० सम्म
गुलिक काल : दिउँसो ०१:१८ देखि ०२:३५ सम्म
अमृत वारवेला : बिहान ०६:५० देखि ०८:०७ सम्म र साँझ ०३:५३ देखि ०६:५३ सम्म
लाभ वारवेला : दिउँसो ०२:३५ देखि ०३:५३ सम्म
शुभ वारवेला : बिहान ०९:२५ देखि १०:४२ सम्म
बिहान ज्ञानगुनका क्षेत्रमा मन आकर्षित भएपनि दिउँसोबाट व्यर्थमा तर्क, बहस र वादविवाद हुने सम्भावना छ । प्रेमसम्बन्ध वा दाम्पत्य जीवनमा तिक्तता आउने छ । मानसिक क्षमता घट्दै गएको अनुभूति हुनेछ । छटपटी र असन्तुष्टि बढ्ने छन्, झैझगडा र विवादले तनाव बढ्ने भएकाले सतर्क रहनु पर्छ । तार्किक र बौद्धिक क्षेत्रबाट सफलता लिन सकिंदैन, पढाइलेखाइमा ध्यानकेन्द्रित हुँदैन । साथीभाइ टाढिने र व्यवहार पनि शत्रुतापूर्ण हुने देखिन्छ । सरकारी र प्रशासनिक काममा बिलम्ब हुनेछ । प्रतियोगिताबाट निराशा हात लाग्नेछ । यद्यपि आमा वा मामाको सल्लाहमा गरिएको काममा फाइदा हुनसक्छ ।
आज दिनदुःखीलाई गरेको सहयोगले भाग्य बढ्ने छ । समग्रमा धैर्य, संयम र सचेत भई बस्नु जायज हुनेछ । बोलीमा उत्ताउलोपन हुने भएकाले संयमता अपनाउनु राम्रो हुन्छ । चिसो चिजबिज खानपान नगर्नु बेस हुनेछ । मनमा कौतूहलता र छटपटी भए पनि आजको दिन आर्थिक रूपमा सामान्यतया लाभ प्राप्त हुनेछ । छिट्टै प्रतिफल आउने लगानीले फाइदा हुनसक्छ । तर दीर्घकालिक लगानीको प्रतिफल भनेजस्तो हुँदैन । भर्खर चिनजान भएको व्यक्तिउपर ठूलो भरोसा नराख्नु राम्रो हुन्छ, नयाँ मित्रले धोका दिन सक्छ । दिन छिप्पिंदै जाँदा विवाद र झगडाको वातावरण सिर्जना हुनसक्छ ।
आजबाट कर्मक्षेत्रमा चन्द्रमाको प्रवेश भएको छ । अध्ययन, अध्यापन वा आफ्नो जिम्मेबारीको क्षेत्रमा लगनशील भएमा लाभ पाउन सक्ने दिन हो । तर कल्पना, भावना, प्रेमसम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनका लागि अनुकूल समय देखिंदैन । सानातिना र झिनामसिना काममा तल्लीन हुनुपर्ने भएकाले सामान्यतया दिन बितेको पत्तो पाइँदैन, तर सोचेजस्तो लाभ प्राप्त गर्न अनुभवीको राय लिनु पर्नेछ, अनिमात्र व्यवसायिक र सामाजिक क्षेत्रमा खटेजति सफलता प्राप्त हुनेछ । श्रमिक, पशुपालक र कृषकले आज कामबाट फुर्सद नपाउनाले बढी थाकेको अनुभूति गर्नेछन् । बेलुकाको वास वा खानपीनमा फेरबदल हुनसक्छ ।